Madaxweyne Farmaajo oo khudbad ka jeediyay shirka Africa Now – Somali Top News
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa khudbad ka jeediyey shirka horumarinta iyo isku-xirka Afrika (Africa Now) ee ka socda magaalada Kampala ee dalka Uganda.
Farmaajo ayaa sheegay in Somalia ay ka mid tahay dalalka ugu horeeya ee saxiixi doona heshiiska ganacsiga xorta ah ee Qaarada Afrika.
Khudbadda madaxweyne Farmaajo ayaa ku saabsaneyd xaaladda Soomaaliya, wuxuuna shirka u sheegay in Soomaaliya ay soo martay xaalad adag, iyadoo hadda kasoo kabaneysa dagaallo sokeeya oo in badan oo dadkeeda ka mida ka dhigay barakacyaal iyo qaxooti ku baahsan caalamka.
Madaxweyne Farmaajo ayaa shirka Kampala u sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu ku dhawaaqo inay Soomaaliya ka mid tahay dalalkii ugu horeeya ee saxiixaya heshiiska ganacsiga xorta ah ee Qaarada Afrika (Continental Free Trade Area) si wax ula qabsadaan dowladaha ay ood wadaagta yihiin.
← Sarkaal katirsan Al shabaab oo lagu dilay gobalka Jubbada Hoose
Eight killed in blast at Somali market: official →
Wasiir Islow: AMISOM waxey kaalin weyn ka qaadan doontaa horu socodka Galmudug
Soomaaliya iyo Shiinaha oo wadahadallo Laba Geesood ah yeeshay
Xildhibaano Iyo Ciidan Ku Dhintay Weerar Gaadmo Ah Oo Ka Dhacay Duleedka Balcad